915nm 20W Pump Laser Diode 105μm Fiber Coupons Laser Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > 915nm 20W Pump လေဆာ Diode 105μm Fiber Coupons Laser Diode
915nm 20W Pump လေဆာ Diode 105μm Fiber Coupons Laser Diode
915nm 20W Pump Laser Diode 105μm Fiber Coupled Laser Diode ကိုဆေးချခြင်း၊ ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများပြုပြင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒီ diode လေဆာသည်ဖိုင်ဘာလေဆာစျေးကွက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အမျိုးမျိုးသော output ကိုအင်အားကြီးရရှိနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်လှိုင်းအလျားနှင့်ပြင်ဆင်မှုများကိုတောင်းဆိုမှုအရရရှိနိုင်ပါသည်။
915nm 20W Pump Laser Diode ၏ 105 အတိုချုပ်105μm Fiber Coupons Laser Diode
915nm 20W Pump Laser Diode 105μm Fiber Coupons Laser Diode ၏နိဒါန်း
915nm 20W pump Laser Diode ၏ 105 အင်္ဂါရပ်များ105μm Fiber Coupled Laser Diode
915nm 20W Pump လေဆာ Diode ၏ 105 လျှောက်လွှာ105μm Fiber Coupled Laser Diode
915nm 20W Pump လေဆာရောင်ခြည် Diode 105μm Fiber Coupled Laser Diode ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â "ƒ)
Pout တွင်လည်ပတ်နေသောဗို့အား VOP - 3.65 - V
ဖိုင်ဘာ core ကို / ဝတ်အချင်း DCOR - 105/125 - μm / μm
Connector အမျိုးအစား - တရားမဝင်သော, FC / APC, SMA905 -
915nm 20W Pimp လေဆာရောင်ခြည်၏ 6. ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်105μm Fiber Coupled Laser Diode
၇။ ၉၁၅nm 20W Pump Laser Diode ကိုပို့ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း105μm Fiber Coupled Laser Diode
hot Tags:: 915nm 20W Pump Laser Diode 105μm Fiber Coupled Laser Diode, ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊
915nm 20W Pump လေဆာ Diode 105μm 0.22NA Fiber Coupons လေဆာ Diode